ကျွန်တော်နှင့် အစိမ်းသေတွေ နေတဲ့အိမ် – Askstyle
ကျွန်တော်နှင့် အစိမ်းသေတွေ နေတဲ့အိမ်
ကျွန်တော်တို့မြို့လေးမှာတော့နာမည်ကြီးထမင်းဆိုင်ကြီးပေါ့/ ရှေးဟောင်းအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းနဲ့ ရောင်းတဲ့သူတွေကလည်း ဖေါ်ရွေတယ် မျက်နှာချိုလက်ရာကလည်း စပါယ်ရှယ်ဆိုတော့..လူချမ်းသာတွေ၊ ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေ ကျွန်တော်တို့ မြို့လေးမှာ ရုပ်ရှင်လာရိုက်တဲ့အခါ နောက်ပြီး ရုပ်ရှင်အဖွဲ့သားတွေ ဘုရားဖူးလာကြတဲ့ အခါဆိုရင်.. အဲဒီ ဆိုင်ကြီး မှာပဲထမင်းစားနားကြတယ်။
အဲလိုအချိန်မျိုးဆိုရင်တော့ တရပ်ကွပ်လုံထွက်ပြီးလာကြည့်ကြ နှုတ်ဆက်ကြနဲ့….ကျွန်တော်တို့ကတော့ထိပ်ဆုံးကပေါ့ဗျာ… ဟုတ်တယ်လေ…ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေကိုခုချိန်မှာ ပိုက်ဆံမပေးရပဲတဝကြည့်ရလို့ပဲ..ဗျ အဲဒီအိမ်ကြီးက စည်းပွားရေးကောာင်း ခင်မင်ဖို့ကလည်းကောင်းတော့…ရပ်ကွပ်ထဲကလူတွေအကုန်လုံး သူတို့မိသားစုလေးကို အားကျ နေကြတယ်.. ကျွန်တော်ကတော့ အဲ့ဒီအိမ်ကြီးကမိသားစုတွေအရမ်းခင်တယ်..ဗျ တနေ့မှာတော့သူတို့အိမ် ကြမ္မာဆိုးကြီး စဝင်တဲနေ့လို့ပဲပြောရတော့မယ်။
အဲဒီအိမ်ကြီးမှာ လူသတ်မှုဖြစ်တယ်…ဖြစ်တာကတော့ညီအကိုအချင်းချင်းဖြစ်တာ ချမ်းသာတဲ့လူတန်းစားတွေဆိုတော့လဲ ငွေကိုအကြိုက်သုံး သောက်စားကြနဲ့..ပြာသနာဖြစ်ကြတယ်.. ဘယ်ကစဖြစ်မှန်းတော့မသိဘူး.. နှစ်ယောက်စလုံး လက်ထဲမှာ..လက်နှက်ကိုယ်စီဆွဲလို့ အိမ်းသားတွေကလည်းဆွဲတဲ့သူဆွဲ ချော့မော့ပြီးတော့ သူတို့လက်ထဲက ပစ္စည်းတွေ သိမ်းလိုက်ကြတယ်။
ညီကိုနှစ်ယောက်ကတော့..အခဲမကြေကြသေးဘူး…မင်းသတိထားနေ… အေး….မင်းလဲ သတိထားနဲ့ ပြောနေကြရင်းနဲ့ ဆွဲထားတဲ့ကြာက အကြီးကောင်လွတ်ထွက်သွားပြီး…ဆန်ထိုးတဲ့သံချွန်ကောက်ဆွဲပြီးထိုးလိုက်တာ..ဟဲ့ ဟဲ့သားငယ်ဆိုပြီး အငယ်ကောင်ကိုတွန်းထုပ်လိုက်တော့..ကွတ်တိပဲ သံချွန်နဲ့..အဒေါ်ကြီးဗိုက်နဲ့ အဲနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးပဲ.. ရပ်ကွပ်က ရဲစခန်းဖုန်းဆက်တော့..ရဲ တွေရောက်လာပြီး ဓာတ်ပုံတွေရိုက် အမှုနဲ့ပတ်သတ်တာမေးပြီး အကြီးကောင်ကို ဖမ်းသွား ကြတယ်။ အမလည်းသေ သားလဲထောင်ကျဆိုတော့သူတို့တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတယ်..အမ အသုဘ ရက်လည်ပြီးတာနဲ့. ဒီကြားထဲသားအမှုကိုလဲငွေကုန်ခံပြီးလိုက်တယ် ငွေကုန်လူပန်းဖြစ်တာပဲအဖတ်တင်တယ် သားကတော့ထောင်ကျတာပါပဲ။
ဒီလိုနဲ့ သူတို့လဲ မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ပဲ နေလိုက်ကြတယ်..နောက်ပိုင်း ဆိုင်ပြန်ဖွင့်တယ်။ အရင်တုန်းကလိုတော့ လန်းဆန်းမှုတွေသူတို့မှာမရှိကြတော့ဘူးဗျ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဆုံးသွားတဲ့ အမက မကျွတ်တော့အိမ်မှာ အမြဲတွေ့ တွေ့နေရတယ် …ညပိုင်းဆိုလဲ သူကလည်းအိမ်ပေါ်မှာလမ်းတွေလျှောက်…နောက်ဖေးမှာလဲ.. အိုးခွက်သံတွေပေးတာ…သူတို့လဲမကျွတ်ဘူးဆိုတာသိတော့ …ဘုန်ကြီးပင့်ဆွမ်းကျွေး အမျှပေးဝေတယ်။ သူက ဘာကိုဆွဲလမ်းနေတာလဲတော့ မသိဘူး ဒုတိယ အကြိမ်အမျှပေးတာလဲမယူဘူး.. ထင်တယ် ညပိုင်းရောက်ပြီဆိုတာနဲ့တအိမ်လုံးလမ်းတွေပတ်လျှောက်…ပုဂံ တွေပြစ်ချနဲ့…အိမ်သားတွေလဲကြောက်နေကြပြီ…အိပ်ရေးကလဲ မဝ ထမင်းဆိုင်ဆိုတော့ အစောကြီး ထချက်ပြုတ်ရတာကိုး။
ဆိုင်က အရင်လိုလဲ စီးပွားရေး မကောင်းတော့ဘူးလေ…ကိုယ်နဲ့ အရမ်းခင်တဲ့ သူတွေဆိုတော့ မြင်ရတာ စိတ်မကောင်း တာတော့ အမှန်ပဲဗျ။ သိပ်မကြာသေးဘူး ဝင်ပြန်ပြီ ဂြိုလ်ဆိုးနောက်ထပ်တခု…အဒေါ်ကြီး၇ဲ့..ညီမအငယ်ဆုံး ညပိုင်း ရေချိုးခန်းထဲဝင်သွားတာတော်တော်ကြာချိန်ထိထွက်မလာတော့… တံခါးသွားခေါက်တော့လဲ အထဲကအသံမပေးဘူး…ဟဲ့ အထဲကမထွက်သေးဘူးလားလို့ မေးတော့ စကားလဲပြန်မပြောတော့…. ဟဲ့ ဟဲ့ လာကြဦးအထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူး…ရေချိုးခန်းတခါးကလည်း ဂျပ်ချ ထားတော့..ရိုက်ဖျက်ပြီးဝင်လိုက်တော့ အထဲကအမျိုးသမီးက နံရံကိုမှီလျှက် မျက်ဖြူ လှန်ပြီး အသက်မရှိတော့ဘူး… သူပံစံကိုကြည်ရတာ ကြောက်လှန့်စရာ..တခုခုမြင်လို့ အကြောက်လွန်ပြီးသေတဲ့ပုံစံမျိုးပဲ
နောက်နေ့…အသုဘ ကိစ္စပြင်ဆင်ကြ ရက်လည်နေ့ကျတော ဘုန်းကြီးပင့်ဆွမ်းကျွေးအမျဝေပေတာပေါ့။ သူလဲ မကျွတ် ပါဘူး ညညဘက်ဆိုရေချိုးခန်းထဲရေချိုးနေတာ ..အိမ်သားတွေသွားကြည့်တော့ဘာမှလဲမရှိပါဘူး…ရေကတော့ အော်တို ဖွင်လျှက်ပဲ … နောက်ညတွေလဲဒီအတိုင်းပဲရေသံတွေကြားနေရတယ်။ အခုတော့..အိမ်ကြီးထဲ အစိမ်းသေ နှစ်ယောက် ဆိုတော့ အဖေါ်ရသွားပြီးပေါ့… ညဘက် လမ်းလျေက်တဲ့သူကလျှောက် ..ရေချိုးတဲ့သူကချိုးနဲ့ပေါ့။
ကြာလာတော့..အိမ်သားတွေက ကြောက်ကလည်းကြောက် စိတ်ကလည်း ညစ်ဆိုတော့… အိမ်ကြီးကိုပိတ်ပြီး…သူတို့ အမျိုးတွေ အိမ်မှာသွား နေကြတယ်…သူတို့မရှိတော့ ပိုဆိုး အိုးခွက်ပုဂံပြစ်ချသံတွေ ဘေးအိမ်ကပါကြားနေရတယ်…. ရပ်ကွပ်ထဲက လူတွေလည်း..ခပ်လန့်လန့်ဖြစ်နေပြီ…လူစုံလို့..အဲဒီအကြောင်းပြောဖြစ်ကြရင်…စိတ်တို ဒေါသထွက်တာက ကျွန်တော် ဟုတ်တယ်လေ…သူတို့ကြောင့် ကိုယ်ခင်တဲ့သူတွေလဲပြောင်းပြေးသွားကြပြီ …သူ့အိမ်ကမိသားစုဝင်တွေပဲ မဟုတ်လား… ဘာဖြစ်လို့ခြောက်လှန့်နေမှန်းမသိ..အမျှပေးတော့လဲမယူဘူး…သက်သက်လိုက်နှောက်ယှက်နေတာ…အိမ်ကြီး ကိုပြစ်ထားပြီး လူမနေတာလဲကြာပြီးဆိုတော့..အိမ်အိုကြီးလိုဖြစ်နေပြီး နောက်အဲအိမ်မှာနေမဲသူရှိရင်နေပေါ့။ အိမ်စောင့်သဘောမျိုး သူတို့ကတောင်အိမ်စောင့်ခဆိုပြီး လခတောင်ပြန်ပေးအုံးမှာ။
သိပ်မကြာပါဘူး အိမ်စောင့်မယ့်သူရောက်လာတယ်။ ဦးလေးကြီးတယောက် ကလေးငယ်လေးနှစ်ယောက် လက်မှာဆွဲလို့၊ ကလေး နှစ်ယောက်က ၆နှစ် နောက်တယောက်က..၈နှစ် အရွယ်လောက်ပဲရှိအုံးမယ်…. သူများတွေတော့မသိဘူး ကျွန်တော် ကတော့တော်တော်စိတ်ပူသွားမိတယ် သူတို့လည်းအိမ်ကြီးအကြောင်းမသိရှာဘူထင်ပါတယ်…ဒီလိုနဲ နေလာတာ..ဘာတွေဖြစ်တယ်လိုတော့မကြားမိပါဘူး… သူတို့သား အဖသုံးယောက်ကတော့ အေးအေးဆေးဆေးပါပဲ…နောက်တပတ်လောက်လဲနေပြီးရော ဦးလေးကြီးမျက်နှာသိပ်မကောင်းဘူး ကျွန်တော်လဲမေးချင်မိတယ် ဘာတွေဖြစ်လို့လဲ ပေါ့..သူနဲ့ကိုယ်နဲ့မှမသိဘဲလေ..အဲတာကြောင့်မမေးတော့ပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့က သစ်သီးဆိုင်ဖွင်ထားတော့ နေ့လည်ပိုင်းနေအရမ်းပူတော့ မိဘတွေကိုအိမ်ပြန်နားခိုင်းပြီး…ကျွန်တော် ဆိုင်ထိုင်နေကြပေါ့.. အဲချိန်မှာ ဦးလေးနဲကလေးနှစ်ယောက် ဆိုင်နားမှာရပ်ပြီးတော့ အရိပ်ခိုနေကြတယ်… ကျွန်တော်လဲ ကလေးနှစ်ယောက်ကို လက်ထောင်ပြပြီးနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်…ကလေးတွေကပြုံးပြတော့.. ပန်းသီးနှစ်လုံး ကောက်ကိုင် ပြီး စားမလာလို့မေးတော့..ခေါင်းညိတ်ပြတယ်.. ကျွန်တော်လဲပန်းသီးတယောက်တလုံး လက်ထဲထည့်ပေးရင်း…ဦးလေး နေအရမ်းပူတယ် ဆိုင်ထဲဝင်နားပါလား ဦးလေး…သြော်….ရပါတယ်ကွယ် ဈေးရောင်းတာအနှောင့်ယှက်ဖြစ်နေပါ့မယ်… ဟာ မဖြစ်ပါဘူး ဦးလေးရယ် လာပါ…ကလေးနှယောက်လက်ကိုဆွဲပြီး..လာဦးလေးအေးအေး ဆေးဆေးနားပေါ့။
နောက်နှုတ်ဆက်စကားပြောရင်း…မေးလိုက်မိတယ်..ဒီအိမ်မှာနေရတာအဆင်ပြေလား ဦးလေးရဲ့…အဆင်ပြေပါ တယ်ကွယ်.. ဒါပေမယ့်…..ကလေးတွေ အတွက်တော့စိတ်ပူတယ်..ဘာတွေများစိတ်ပူစရာရှိလို့လဲဦးလေးရ…လို့ မေးတော့ဖြေချင်ပုံမရဘူး…. နောက်မှအိမ်ကြီးကမသန့် ဘူကွဲ့…ကလေးတွေနဲ့ဆိုတော့မသင့်တော်ပါဘူးကွယ်….ကျွန်တော်သိလိုက်ပြီးဟို အစိမ်းသေတွေကြောင့်ဆိုတာ ဒီရက်ပိုင်းဦးတို့ အိမ်ပြန်အပ်တော့မယ် ဦးလေး မစောင့်တော့ ဘူးကွဲ့
သူတို့ပြောင်းမယ်နေ့မှာလာနှုတ်ဆက်တယ်..စိတ်တော့မကောင်းဘူး..ခင်တာမှမကြာသေးဘူး..ခွဲရတော့မယ်… ဦးတို့သွား တော့မယ်ကောင်လေး… ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ.. ဒီစကားလေးပဲပြောနိုင်တယ်..ကလေးတွေကတော့ တာ့တာ့ပြနေတော့ ပိုပြီး စိတ်မကောင်းဘူး…ကလေးတွေနောက် ကျောကိုငေးကြည့်နေမိတယ်… စိတ်ထဲမှာလဲ…အဲဒီအိမ်ကြီးက နှစ်ကောင် ကြောင့် ဒီည ငါ့နဲ့တွေ့မယ်လို့ ကျိမ်းထားလိုက်တယ်။
ညပိုင်းဆိုင်လဲသိမ်းရော..သူငယ်ချင်းတွေဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ရောက်လာကြတယ်…ဟျောင့် အဆောင်မှာ ဂစ်တာသွားတီးမို့ မင်းကိုလာခေါ်တာ… ဟာ…မသွားချ င်ဘူကွာ..စိတ်ညစ်နေတယ်.. အေး …အရက်ဆိုင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့လိုက်မယ်… မင်းသောက်ချင် ရင်လိုက်ပို့ပေးမယ်လာ သွားစို့ အရက်ဆိုင်ရောက်တော့..အိမ်ကြီးအကြောင်း တွေးရင်း.. တစိမ့်စိမ့် ထိုင်သောက်နေလိုက်တယ်…နည်းနည်းမှန်လာတော့မှ… မင်းတို့အဆောင်သွားရင်သွားကြတော့လေ…ငါကတော့မလို က်တော့ဘူး…မင်းကိုအိမ်လိုက်ပို့ပေးအုံးလေ…ဟာ ရပါတယ်ကွာ ငါ့ဟာငါလမ်းလျှေက်ပြန်တော့မယ်… အေးး ပီးရောအာ့ဆိုလဲငါတို့…ဒိုးပီကွာ။
သူငယ်ချင်းတွေလဲထွက်သွားကြပြီး… သောက်ထားတာရေချိန်လဲကိုက်ပြီး… ပိုက်ဆံရှင်းပြီးဆိုင် ကထွက်တော့…၁၁နာရီခွဲ… အချိန်ကောင်းပဲ..လသာရက်ဆိုတော့..လမ်းတလျှေက်လုံးလင်းထိန်နေတာပဲ…ဒီလိုနဲ့လျှောက်လာရင်းနဲ့.. အိမ်ကြီး အရှေ့ရောက်လာပါပြီ….. ည၁၂နာရီကွတ်တိပဲ.. ဒါ နဲ့ လုံချည်ကိုဂွင်းသိုင်းပြီး လမ်းဘေးက အုတ်ခဲကျိုး ဆယ်လုံးလောက် ကောက်ထည့်ပြီး…အဲဒီအစိမ်းသေအိမ်ကြီးထဲ.. အုတ်ခဲတလုံးလှမ်းဆော်ထည့်လိုက်တယ်… ခွမ်းးးဆိုတဲ့အသံနဲ့ မှန်တချပ် တော့ ကွဲသွားပြီး.. ဟေ့…အိမ်ကြီးရှင်တို့ရေ..ဘယ်သူရှိလဲ…ကွ ရှိတယ်ဆိုရင်လည်း အရိပ်အရောင်လေး လာထွက်ပြကြ လေကွာ…တွေ့ချင်လို့…သောက်ဂရုမစိုက်ဘူး.. သေတော့လည်းအသေမလှ ..လာနေအမျှလူတွေကို ဒုဒ္ခ လိုက်ပေးနေတဲ့ ဟာတွေ..ထွက်ခဲ့ကြလေကွာ။
အိမ်ကြီးကတော့ တိတ်ဆိတ်မြဲပဲ….မထွက်ကြဘူးပေါ့…ရော့ကွာ ရော့ကွာ…စိတ်တိုတိုနဲ့ အုတ်ခဲတွေတလုံးပြီး တလုံး အိမ်ထဲပြစ်သွင်းလိုက်လိုက်တယ်…. တဒုန်းဒုန်းနဲ့…ဘာမှတုန့်ပြန်သံမကြားတော့..အိမ်ကြီးရဲ့အုတ်နံရံ ပေါ်တက်ပြီးတော့…အနီးကက်အားရပါးရဆော်နေတာ…ဆော် လို့လဲဝ အုတ်ကျိုးလဲကုန်ပြီး… ငါ့..ခွီးတဲ့ဟာတွေ..တွေ့ချင်တဲ့သူကြတော့ အရိပ်တောင်မပြရဲတော့ဘူး…ပြစ်ပြစ်နှစ်နှစ်ဆဲဆိုပြီး… အေး…မ ကျေနပ်ရင်လိုက်ခဲ့လို့ ရတယ်နော်. .မကြောက်တက်လို့ တယောက်ထဲလာတာကွ…လူလဲ စိတ်ကျေနပ်သွားပြီ။
အိမ်ပြန်ဖို့လမ်းထဲ စဝင်လိုက်တာနဲ့..အူးးးးးဝူးးးးအူးးးးလမ်းထဲကခွေးတွေ…အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ကို အူနေတာ… အဲအချိန် လူလဲ..ကြက်သီးတချက်ဖြန်းခနဲ့ထသွားတ ယ်….ဂရုမစိုက်ပါဘူး…အိမ်ကိုတန်းပြီးပြန်လာခဲ့တယ်…အိမ်ရောက်တော့ အဖေကတံခါးဖွင်ပေးရင်း… မင်းတော့ကွာညည့်နက်မှပဲ ပြန်ပြန်လာတယ်…ကိုလဲကိုယ်အိပ်ယာကိုတခါတည်းတန်းသွားပြီး…လှဲချလိုက်တယ်.. လသာတော့..ပြတင်းပေါက်ကနေ လရောင်တွေကခန်းလုံးပြည့်ပဲ…ကိုယ်လဲကိုယ်လုပ်ခဲ့တာ ပြန်စဉ်းစားရင်း ကျေနပ်နေမိတယ်..အဲ့ဒီအချိန် အိမ်နံရံပေါ်ကုပ်တက်နေတဲ့အသံကြားလိုက်မိတယ်… ဘာလဲ… ဟ….ငါခေါ်လို့ပဲလိုက်လာတာလား… သေချာနားထောင်နေတုန်း
ပြတင်းပေါက်ပေါ်..မဲမဲအကောင်ကြီးတွယ်တက်လာတယ်..ဟော…ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ဧည့်သည့်တော့လာပါပြီး.. ကိုယ်စခဲ့တဲ့ဇတ်လမ်းပဲလေ…အကောင်ကြီးကခြင်ထောင်ဘေးမှာငုတ်တုပ်ထိုင်ပြီး..ခြင်ထောင်ထဲကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်.. ကိုကလည်းဝင်လာတာနဲ့..တုန်ပြန်ဖို့..သတိတော့ထည့်ထားပြီးသား..ဝုန်းးးးဆိုအကောင်ကြီးကခြင်ထောင်လှန်လို့…ရင်ဘက်ပေါ်တက်ပီး…လည်ပင်းကိုတအားညှစ်တော့တာပဲ… ကိုယ့်လည်း ရုတ်ကနဲ့ထပြီး…ပြန်တွယ်ဖို့လုပ်တော့…ဟာ….ကိုယ်လုံးကမကြွဘူး… လက်တွေလဲလှုပ်မရတော့ဘူး.ဟိုကလည်းခွပြီးတအားကို ညှစ်ထားတာ..လှုပ်လို့မရလေ ဒေါသထွက်လေ… ညှစ်ကွာမင်းဦးနေမှတော့…သေအောင်ညှစ် ကွာ။
လူကတော့တောင့်ခံထားတယ်..ကြာတော့အသက်ရှူကြပ် လာတယ်…မျက်လုံးတွေလဲပြာလာပီ…ခေါင်းရင်းကိုမော့ကြည့် လိုက်မိတော့…ဘုရားစင်သွားတွေ့တယ်…ဒေါသစိတ်ကြောင့် ကိုယ်ခေါင်းရင်းမှာဘုရားစင်ရှိတာတောင်သတိမထားမိဘူး… စိတ်ကိုလျော့ချလိုက်တယ်…ဘုရားရှင်ကို..အာရုံပြုပြီးတော့…သံဗုဒ္ဓေဂါထာကို စိတ်ထဲက ဖြေးဖြေးနဲ့.. မှန်မှန်ရွတ်ချ လိုက်တာ…ဝုန်းခနဲ့ဆို…အကောင်ကြီးပြတင်းပေါက်ကခုန်ချပြီးပြေးတော့တာပဲ။
အိမ်ပေါ်ထပ်မှာအသံကြားလို့..အဖေ တက်လာခဲ့တယ်…ခဏကအသံကြားလို့ လာတက်ကြည့်တာ ဘာဖြစ်တာလဲတဲ့….ကျွန်တော်တကိုယ်လုံးလဲချွေးတွေရွှဲလို့.. ဘာာာ မှမဖြစ်ပါဘူး..အဖေ… အေးအေး…ဘုရားရှိခိုးပြီးအိပ်ကွာပြောပြီြး ပန်ဆင်းသွားတယ်…နောက်ဆိုရင်..ပရလောကသားတွေနဲ့….ပတ်သက်လာရင် မမိုက်ရဲတော့ဘူးဗျ….ဟုတ်တယ် လေ..သူကကြီးကိုယ့်ကို..အပြီး လုပ်တာ…ကိုယ်ကဖြင့်..လက်တောင်လှုပ်လို့မရဘဲ…….ဗျ
Credit – Myanmar post